Ukugqoka Lapho ukukhanya kungena emafasiteleni ngenqanaba elifanelekile, kuzokhipha isilinganiso sokukhanya kobuhle, ukukhanya ukuze kulethe abantu egumbini lapho okungaqondakali futhi kuthule khona ingqondo, njengoNyx ongaqondakali futhi othule, ukusetshenziswa kwezindwangu ezicijile kanye ukusonteka ukumangalisa ukuhunyushwa okunjalo kobuhle.
Lwesibili 2 Novemba 2021
Umgexo Ikholaji ebukekayo ephefumlelwe ngama-ruffs, imihlobiso yasentanyeni yasendulo ongayibona emidwebweni eminingi emihle yekhulu le-XVI ne-XVII. Ifakwe ngumklamo wesimanje nowanamuhla, ukwenza lula isitayela sama-ruffs ejwayelekile ukuzama ukuwenza ube wesimanje nowesimanje. Umphumela onobunzima obunika ubuhle kulowo ogqokile, usebenzisa imibala emnyama noma emhlophe ivumela ukuphindaphindeka kwezinhlanganisela ngomklamo wanamuhla futhi omsulwa. Umgexo wocezu olulodwa, oguqukayo nokukhanya. Izinto ezingasizi ngalutho kodwa ezinomklamo ogqamile wemfashini owenza ukuthi leli kholomu lingagcini ngobucwebe kodwa umhlobiso womzimba omusha.
Uhlelo Lwemicimbi Yokwakhiwa
Uhlelo Lwemicimbi Yokwakhiwa imibukiso, imincintiswano yokwakha, amashabhu wokusebenzela, ukubonisana ngemiklamo yokufundisa nokushicilela okuhlose ukukhuthaza abaqambi bemikhiqizo yaseRussia nemikhiqizo yaphesheya. Imisebenzi yethu igqugquzela abaklami abakhuluma isiRussia ukuba benze ulwazi lwabo namakhono ngamaphrojekthi wamanye amazwe futhi abasize baqonde iqhaza labo kumphakathi wokuqamba, ukuthi bangayithuthukisa kanjani futhi benze imikhiqizo yabo bancintisane, futhi badale nezinto ezintsha.
Sonto 31 Okthoba 2021
I-Paravent Lokhu kungumkhiqizo osebenza njengokusebenza nobuhle ngasikhathi sinye, obhalwe ngesipikili ngesiko nezimpande. 'Okuhle futhi Okubi' kusebenza njengezithiyo eziguqukayo nezeselula zobumfihlo ezingakhiphi noma ziphazamise isikhala. I-motif yamaSulumane inikeza umphumela ofana ne-lace osuswe futhi ophikisana nevesi elivela kwinto yaseCorian / Resin. Okufana ne-yin yang, kuhlale kunokuhle kokubi futhi kukubi njalo kokuhle. Lapho ilanga selishonile ku-'Ingqondo efanelekile 'futhi kungumzuzu wayo okhanyayo futhi amathunzi wejometri apenda igumbi.
I-Premium Vodka Enobucwebe
Mgqibelo 30 Okthoba 2021
I-Premium Vodka Enobucwebe I-Vodka ye-Premium enobucwebecwebe besiliva obunjwebu be-Swan obufakwe ngamakristalu weSwarovski.
Lwesihlanu 29 Okthoba 2021
I-Cocktail Bar Ngenkathi uGamsei evulwa ngonyaka ka-2013, i-hyper-localism yethulwa emkhakheni wokuzijwayeza lapho ngaleso sikhathi owawubekelwe kuphela endaweni yokudla. EGamsei, izithako zama-cocktails zihlanganiswa ngokomdabu noma zikhuliswe ngabalimi bendawo abasebenza ngobuciko. Ingaphakathi le-bar, ukuqhubeka okucacile kwalefilosofi. Njengama-cocktails, uBuero Wagner wathenga zonke izinto zasendaweni, futhi wasebenza ngokubambisana nabakhiqizi bendawo ukukhiqiza izixazululo ezenziwe ngokwezifiso. IGamsei ngumqondo ohlanganiswe ngokuphelele ophendukisa umcimbi wokuphuza i-cocktail ube yinto yenoveli.
Ukugqoka Umgexo Uhlelo Lwemicimbi Yokwakhiwa I-Paravent I-Premium Vodka Enobucwebe I-Cocktail Bar